Ngeke kanjani ICO Market ukushintsha e 2018? - Blockchain Izindaba
Ngeke kanjani ICO Market ukushintsha e 2018?
2017 wabona Ukwanda kwenani ICOs, njengendlela wamavukelambuso ukuheha utshalomali. Kulo nyaka 234 ICO amaphrojekthi iphakamisile ezingaphezu kuka $3.7 bhiliyoni, ne ingxenye enkulu kakhulu kwezimali ezitshalwe kokuba bakhangwa kusukela ngo-May kuya ku-October, ngokuvumelana Coinschedule. Ochwepheshe bakholelwa ukuthi ngonyaka ozayo, Nokho, Ngenxa yokuthi lokhu sekwandile izoyenqaba futhi ICO emakethe uzobhekana ukunciphisa abalulekile nokuqalwa kabusha.
Ngokusho Jerry Brito, UMqondisi oMkhulu we engenzi-nzuzo Coin-Centre, ohulumeni kuzokhulisa ukulawula yokuthengisa ithokheni. Kulo nyaka US Securities and Exchange Commission (SEC) wathi ukuthi zemali virtual noma amathokheni enikelwa noma kuthengiswe kungaba izibambiso. Uma kunjalo izibambiso, ukunikezwa futhi ukudayiswa kwalezi zemali virtual noma amathokheni i ICO angaphansi federal izibambiso imithetho. Mayelana nalokhu, SEC babamangalela ngamacala amabhizinisi futhi okungezona lehambisana nemtsetfo ngokumelene abagqugquzeli eziningana ICO. Brito ecabanga ukuthi kwamanye amazwe, okuyinto futhi nizomthatha anti-umkhonyovu izinyathelo, izolandela isibonelo US.
Isidingo ithokheni yokuthengisa ukuthobela SEC imithetho, kuhlangene zimali’ isifiso sokuba nethemba, kungaholela Umkhuba omusha. Ngo 2018, Sizobona ukuvela amapulatifomu zomnikelo amathokheni omusha okuyofanele kangcono amathokheni ngaphambi kokuba uvunyelwe ithengiswe, futhi kuzosiza zimali benze izinqumo ezingcono mayelana nabo.
Brito ubikezela ukuthi ekuqaleni, lezi amapulatifomu ngeke kuphela uzovulelwa zimali accredited.
Ngakho, njengoba umkhakha professionalizes, Kungenzeka siyaqonda ukuthi ICO bubble kuqhume. Empeleni, a Ukwehla kwakuyobonisa ukuthi kukhona imikhonyovu nje okumbalwa. Ngenxa imodeli entsha uxhaso, ICOs Ulapha ukuze uhlale.
Oliver Bussmann, umsunguli nokuphatha partner Bussmann Advisory, umongameli hhayi ngaphandle kwenzuzo Crypto Valley Association kanye nowabe iqembu CIO futhi umqondisi at Swiss zezimali ebambe UBS, ngokuqinile ukholelwa ukuthi izwe ICOs iyoba ovuthiwe ngaphezulu 2018 njengoba abadlali zendabuko ezingaphezu ahileleke. Ngenxa yalokho, bayoba ukutshala Ipo yabo isipiliyoni kanye namakhono ukuthuthukisa imboni entsha futhi lonke ibhizinisi inamathele umfuziselo ehlelekile kangcono nokuningi professional ukutshalwa edonsa.
Ezalandela izinyanga 12-18, Ngilindele kuyoba izimfanelo ICO sika, ezifana isakhiwo incwadi, namanani entengo, kokuhlaziywa sokuqalisa, njalo njalo. Njengoba sike usuqala ukubona, kuyoba nzima ukuthola imali nje ngemuva iphepha elimhlophe. Abatshalizimali bayofuna izinhlelo zebhizinisi umsindo namazinga aphezulu obala.
Inhloko yomnyango bezokusebenza Ripple, Stephan Thomas kuvumelana agumenti ngenhla, ngokuvumelana post yakhe ngesikhathi Quoara (yesikhulumi social of ulwazi ukwabelana). Ubona eziningi ukufana wave ICO namuhla kanye altcoin igagasi 2014. Mayelana nalokhu, hype kokuqala lizodedela a ICO ongokoqobo futhi olinganiselayo; ICOs abaningi kuyodingeka bashintshe indlela ababheka ngayo ukuheha utshalomali. Mark Lurie futhi ukholelwa ukuthi ngonyaka ozayo ngeke kube okuningi dolobha yesikhungo ezokwenza zonke ukuya esezingeni amaphrojekthi.
Kuzobakhona shakeout e ICOs nokubaleka kwikhwalithi. Kuzobakhona ekwandeni ICOs lapho bambalwa kuphela abazoya ngokudayisa. Kuzoba okuningi dolobha yesikhungo ezokwenza zonke ukuya esezingeni amaphrojekthi. Yilokho okwenzeka ngesikhathi kunezinkinga zemali nge ibhizinisi dolobha nokukhula nokulingana imizuliswano, kakhulu. Iningi lezinkampani ayikwazanga ukukhulisa noma yiziphi izimali, kodwa labo ezingase imali wakwenza ngaso namanani okusezingeni eliphezulu ngempela.
Ngo 2018, abahambayo bayiziphukuphuku phezu ingxenye izinkampani okwenza ICOs futhi ezihlobene Bitcoin-imikhiqizo kuyoba ukuba wean umphakathi kanye nabezindaba off “ukheshe digital” umqondo, njengoba imibiko yentambo. Kuyinto Isingathekiso ayisekho kunengqondo, futhi ithola endleleni ukuqonda kwethu ngendlela efanele ubuchwepheshe obusha libukeka imali kodwa ngempela akusekelwe. Kodwa ICO ababambiqhaza kuyodingeka wenze imizamo ezinkulukazi ukushintsha isithombe umkhakha. William Mougayar, a abatshalizimali Canadian owaziwa, usomabhizinisi, kanye nombhali wezincwadi eziningana blockchain, uthi wamanje ICO emakethe futhi amathokheni ukuheha abadlali okungalungile.
Akukhona nje kuphela ukuthi Token 1.0 Ukuheha izinhlobo okungalungile amaphrojekthi, kodwa futhi edonsa izinhlobo okungalungile labantu abakwazi ukubona uzuza intuba kusukela ukuphotha lwemali, ukhulisa esixukwini futhi bethembisa inyanga, nge nokuziphendulela okuncane ozoba ngokumelene. Ngokuyinhloko, kumelwe avakashele futhi zisebenza emisha eziyisisekelo blockchain. Khona-ke sidinga ukuhlola ukusebenza ithokheni ngokuhlolisisa, ngaphandle kuka-ukwakha amakhono ithokheni. Sidinga ukubeka blockchain emuva ku ezothando, hhayi uphawu.
Vitalik Buterin elikushoyo uhlobo olusha amathokheni kanye. Abeciniseka ngekutsi e 2018-2019 uhlobo olusha amathokheni, ICO 2.0, zizovelela ukhulile ICO emakethe.
Kukhona ezinye imibono emihle, kukhona okuningi imibono esabekayo, futhi kukhona okuningi kakhulu, imicabango emibi kakhulu, futhi impela imikhonyovu ambalwa kanye. Ngilindele ukuthi amathokheni 2.0 kanye izinhlobo zezinto abantu uzoqala ukwakha e 2018 futhi 2019 kuthanda, ngenjwayelo, kube izinga makhulu kakhulu. Ikakhulukazi uma siqala ukubona ukuthi yini imiphumela igagasi lokuqala amathokheni kukhona Esikhathini esimaphakathi-to-eside.
Mastercard patent a ...
New ucwaningo iphepha s ...
Thumela Previous:Blockchain Izindaba Januwari 7 2018
Thumela Landelayo:mayelana ICO: Ubani eqoqwe izimali kakhulu phakathi yokuthengisa ithokheni